Sheekada Filimka Aksar 2: bandhiga jilaayasha ma xumo balse sheeko meesha laguma haayo | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada Filimka Aksar 2: bandhiga jilaayasha ma xumo balse sheeko meesha laguma haayo
Sheekada Filimka Aksar 2: bandhiga jilaayasha ma xumo balse sheeko meesha laguma haayo
Waxaa Jimcadii tiyaatarada la saaray filimka Aksar 2 oo ah qaybtii labaad filimkii Aksar ee sanadii 2006 guusha dhex dhexaadka ahaa gaaray.
Jilaayaasha filimkaan: Zareen Khan, Gautam Rode, Lillete Dubey, Abhinav Shukla, S. Sreesanth, Mohit Madaan.
Muxuu Ku Wanaagsan Aksar 2: Waa filim qayaano iyo jaceyl dareen isku dheehan ah sheekadiisa dhex dhexaad tahay balse Zareena Khan bandhig fiican sameesay.
Muxuu Ku Liitaa Aksar 2: Waa filim isku xirkiisa wacneyn waxaana la rabay hadii qayaano iyo jaceyl isdaba mareen yahay in sheekadiisa la adkeeyo midaas ma dhicin waxaana ka muuqdo caajis fara badan.
Daawo Ama Ha Daawan Aksar 2: Hadii aad xiiso u qabtid isku soo dhawaansho daawo Aksar 2 waxaad ka heleysaa 12-shumis ka badan balse ma ahan filim sheeko wacan leh waqtigaagana meel kale waad ku bixin kartaa.
Fariinta Filimka Aksar 2 Oo Kooban: Filimkaan ayaa ka hadlaayo haweeney waayeel ah oo Bilyaneer ah iyo koox rabto inay hantideeda ka dhacaan.
Haweeneyda Bilyaneerka ah Mrs. Khambatta (Lillete Dubey) waxay u geeriyooneysaa xaalad aan la fahmi karin waxaana hantideeda sharci ahaa la weydiisanaa maamulaheeda Pat (Gautam Rode) inuu maamulo.
Pat (Gautam Rode) wuxuu ganacsiga masuulka looga dhigay kusoo daraa gabbar karti badan oo leh xirfad dheeraad ah waana Sheena Roy (Zareen Khan).
Sheena Roy (Zareen Khan) shaqada wuxuu Pat ku siiyay shuruud ah inay la seexato ama gogol dhaaf la sameyso madaama ay shaqada u baahan tahay dalabaadkiisa ayay aqbaleysaa.
Balse Sheena Roy (Zareen Khan) waxay ka qarineysaa Pat inay saaxiib leedahay waana Ricky (Abhinav Shukla) oo ay ku taageero lacagaha ay Pat ka qaado.
Hadaba qaybaha dambe filimkaan waxaa loo daawan doonaa sida Sheena iyo jaceylkeeda Ricky ay u doonayaan hantida kala wareegaan Pat meeshana waxaa ka dhacaayo qayaano sedex geesood ah.
Maxaa Lag Yiri Sheekada Filimka Aksar 2: Director Ananth Narayan Mahadevan wuu dadaalay balse sheekadiisa isku xir fiican uma sameynin waxaana ka muuqdo caajis badan weliba qaybaha dambe filimkaan.
Qaabka sheekada loo qoray ayaa dishay fariinta filimkaan mana ahan wax lagu qanci qayaanada la isku sameenayo wuxuuna Aksar 2 ka mid noqday aflaanta ugu tayada liitaan sheeko ahaan 2017 Bollywood-ka sameeyaan.
Bandhiga Jilaayaasha: Zareena Khan dadaal wacan ayay sameesay bandhigeeda ma xumo balse sheeko kuma dhicin inkastoo ay jirkeeda isku dayday inay daawadayaasha kusii jiidato!
Gautam Rode qaybta hore bandhigiisa waa dhex dhexaad laakiin waxaa naxdin ah in gabi ahaanba qaybta dambe muuqaal ahaan ugu yar yahay atoorahan.
Abhinav Shukla wuu dadaalay balse xarakaadkiisa kuma filno madaama door wacan ku dhicin qaabka sheekada filimkaan loo diyaariyay.
Gunaanad: Aksar 2 waa tijabao qaldantay gabi ahaanba waxaa wanaagsaneyd in mashruucaan qayb labaad laga sameynin madaama dhan walbo uu ku liito sheeko ahaan waana mid ka mid ah filimada ugu liitaan 2017 waxaana sheeko ahaan la siiyay 1.5/5 taasi oo ka dhigan in dhan walbo uu ku liito.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Aksar 2:
Waxaa Aqrisay 724